Bologna - tanàna malaza sy malaza Italiana, akaikin'i Milan , toerana nahaterahan'ilay sokatra Bolognese malaza, izay ahitanao zavatra mahaliana maro. Eto no misy ny tranobe maoderina izay miara-dalana amin'ny tranobe tranainy, izay mahagaga fa mifanaraka tsara amin'ny antokom-pananganana anton-javatra ao an-tanàna. Noho izany, inona no mendrika ny mahita any Bologna?
Basilica of Saint-Petronius
Io fiangonana lehibe io dia naorina tamin'ny 1479 tao amin'ny faritry ny fiangonana kely valo. Io no fiangonana lehibe indrindra faha-enina manerana izao tontolo izao, noho ny mponin'i Bologna tena mirehareha. Ny basilika dia natao amin'ny endriky ny lakroa katôlika, misy onja telo sy kapila. Ny endriky ny fiangonana, na ivelany sy anatiny, dia natao tamin'ny fomba Gothic.
Ny endri-javatra mahaliana ao amin'ny basilika dia ny meridiana voasambotra ao amin'ny gorodany, izay manaporofo ny zava-misy amin'ny fihodinan'ny tany manodidina ny Masoandro. Ao amin'ny katedralana koa ny taova roa - ny antitra indrindra amin'ny any Italia.
Ity dia rafitra fanabeazana mavitrika, izay iray amin'ireo oniversite tranainy indrindra any Eorôpa. Indray mandeha, Francesco Petrarca sy Albrecht Durer, Dante Alighieri ary Paracelsus, Papa Nicholas V sy ireo olo-malaza ary mpanakanto malaza dia nomena ny fahalalany eto. Ny Oniversite dia naorina tamin'ny 1088 ary tsy ela dia lasa ivon'ny siansa Eoropeana, fantatra amin'ny hoe Studium. Ny Anjerimanontolon'i Bologna dia nanangona teo ambanin'ny elany ny sangan'asa ara-tsaina tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny, maherin'ny 90.000 ireo mpianatra no misoratra anarana eto izay tonga any Bologna avy amin'ny faritra samihafa amin'i Italia sy avy any amin'ny firenen-kafa.
Ny Loharano Neptune
Ao amin'ny Piazza Nepttuno dia misy rafitra tsy mahazatra. Mba hijerena ny loharano ao Neptune dia maro ireo mpizahatany tonga any Bologna. Ity loharano ity dia naorin'ny mpanao sary sokitra Jambologni, notendren'ny Kardinaly Borromeo.
Ny singa manan-danja indrindra manintona ity toetran'i Bologna ity dia vondrona sokajy tsy mahazatra ao afovoan-tanàna. Nipoitra avy any amin'ny mpanjaka mena ny Neptune mitazona ny trondro nentim-paharazana, ary nanodidina ny tongony varahina, dia naseho an-tsoratra fa niteraka adihevitra be teo amin'ny olom-pirenen'i Bologna izany. Ny sasany nanolo-tena ho "mitafy" ny angano angano, ny hafa kosa dia niady tamin'ny fandravana ny rafitra, fa ny loharano ao Neptune kosa dia miadana tsara mandraka androany.
Misy marika maromaro mifandray amin'ny loharano Neptune. Ohatra, imbetsaka ny mandeha manodidina azy io dia famantarana "ho vintana", izay nampiasain'ny mpianatra ao amin'ny Oniversiten'i Bologna, mponina sy mpitsidika ny tanàna nandritra ny taona maro.
Ny tranombakoka lehibe indrindra ao Bologna dia ny National Pinakothek - iray amin'ireo galleries artista tsara indrindra any Italia. Ahitana karazana sarobidy maro izy io: ny asan'i Raphael sy Giotto, Guido Reni sy Annibale Carraz, ary ireo tompon-tany italiana malaza izay nahary ny taonjato XIX sy XIX.
Ny Pinacoteca dia ahitana ny tranokala fampirantiana telopolo. Misy fampiratiana tsy tapaka amin'ny zavakanto ankehitriny, fianarana fiofanana.
Towers sy arcades de Bologna
Izay rehetra mitsidika an'i Bologna dia mahatsiaro ireo tilikambo malaza marobe. Izy ireo dia naorina tamin'ny Moyen Âge, ary tsy hoe rafitra fiarovana fotsiny. Tao amin'ny XII-XIII taonjato taorian'ireo fianakaviana manankarena dia heverina ho malaza ho mandidy ny fananganana tilikambo amin'ny fomba mahazatra azy. Noho izany dia naorina ny tilikambon'i Azinelli (ilay avo indrindra ao an-tanàna), Azzovigi, Garizenda ary tilikambo hafa-symbolisman'i Bologna. Hatramin'ny androntsika, tokotokony ho 17 monja sisa no voatahiry ao Bologna, ary misy birao famokarana mpanao asa tànana mivarotra tsena sy asa tanana isan-karazany.
Ny arcades dia trano efa voarakotra lava izay mampifandray ireo tranobe misy tanàna. Izy ireo dia iray amin'ireo fiaramanidina tsara indrindra any Bologna miaraka amin'ireo tilikambo. Tany amin'ny faramparan'ny Moyen Âge, raha nahatsapa ny fahamendrehany ny tanàna, lasa toeram-pahaizana ara-tsaina sy ara-barotra malaza tany Italia, nanapa-kevitra ny hanangana bala toy izany any akaikin'ny tranobe lehibe iray ny fitondran-draharahan'i Bologna. Avy eo izy ireo dia hazo, ary avy eo dia nosoloina vato, afa-tsy ny portico tokana tao amin'ny araben'i Maggiore. Vokatr'izany, ny arcade dia nampifandray ny tanàna iray manontolo: afaka mandeha an-kalalahana izy ireo, miafina amin'ny rivotra na orana.
Krasnaya Polyana, Sochi - inona no tokony hojerena?
Greenland - nosy lehibe indrindra eto an-tany
Monastera ao Suzdal
Toeram-pisakafoanana any Kaliningrad
Fampiantranoana any Bulgaria ho an'ny fianakaviana manana ankizy
Aiza ho aiza ny fialantsinin'ny ririnina?
Inona no havoakan'ny Vladivostok?
Mofomamy ho an'ny cake - recipe
Wedding amin'ny endriky ny rokoko
Ahoana no hanokafana fantsom-bola?
Inona no anomezany aina ho an'ny zazavavy?
Pear Augustow ny ando - ny toetra sy ny toetran'ny karazany
Ahoana ny fomba hampihenana ny lanjany?
Ahoana no fomba hanoroana T-shirt amin'ny tananao?
Julia Prokhorova - Vola volamena
Ny linoleomin'ny ankizy
Ny rahalahin'i Ben Affleck
Laikas - anaran'olona ho an'ny alika zazalahy
Ahoana no fomba anaovanao ottoman anao?
Nahatonga ny tsy fisian'i Rianna tao amin'ny Grammy-2016 ilay aretina
Sarcoma tavy mena
Kaomandàn'ny alika avy amin'ny parasy
Anubias - votoaty ao amin'ny aquarium
Fanoratana ny loggia
Black magic - hanasazy ny fahavalo